ဟက်ကင်ဆန်စက်ဘီးတာယာတွေကိုဘယ်မှာလုပ်ထားတာလဲ။ - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > Hutchinson စက်ဘီးတာယာ - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
Hutchinson စက်ဘီးတာယာ - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
သင်၏တာယာများသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးမည်သည့်ဖိအားသည်မှန်ကန်သင့်သနည်း။ အစမှ စ၍ ပထမအချက်မှာသင်၏တာယာကိုအနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးဖိအားများအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖိအားများအတွင်းတက်နေစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဤ Continental သည်အကြံပြုထားသောအမြင့်ဆုံးဖိအားသာ ၈.၅ ဘားသာရှိသည်။ PSI ၁၂၀ ဒါကြောင့်သင်ကကပ်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးဘေးကင်းရေးအတွက်စက်ဘီးကိုဖိအားအတိုင်းအတာရှိတဲ့ဖိအားနဲ့အတူအမှားမလုပ်မိပါစေနဲ့။ ငါပထမတစ်ခုကဝယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ရေတိုမှာ ၁၀၀ PSI ကဘေးကိုနှိပ်သလိုခံစားရတယ်။ တာယာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲဘေးဘက်၊ အခြေခံအားဖြင့်သင့်လက်ချောင်းများကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်ဆန်စွာ နှိပ်၍ မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ၊ မရေရာဒွိဟ၊ ကျွန်ုပ်သိပါသည်၊ သို့သော်သင့်တွင်စံမရှိသောကြောင့်သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း ယခုကျွန်ုပ်တို့လုံခြုံနေပြီ၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောစမှတ်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏တာယာအကျယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုစဉ်းစားရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ ပိုမိုလေးသောမြင်းစီးသူရဲများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားလိုအပ်သည်။ (ပေါ့ပါးသောဂီတသံ) တာယာများကိုဆုပ်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်သည်၊ သင်အရှိန်မြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်နှေးကွေးခြင်းတို့ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်သိသာသည်။ သို့သော်အလွန်ခက်ခဲသောတာယာသည်လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပုံပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်သဖြင့်ရော်ဘာတာယာတစ်ခုချင်းစီနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းသွားသည်။ သငျသညျအများကြီးလျော့နည်းချုပ်ကိုင်ထားဆိုလိုတာကလမ်းနှင့်အတူ။
ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့သင်ဆိုင်ကယ်စီးနေချိန်မှာတာယာကိုချုံ့ဖို့ဖိအားတစ်ခုစီးချင်တယ်။ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဤသည်မှာလေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူအများစုက ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှဖရန့်ဘဲတိုအမည်ရှိလူတစ် ဦး ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသဘောတူဟန်တူသည်။ အကောင်းဆုံးဖိအားသည်စုစုပေါင်းအမြင့်၏ ၁၅% ဖြစ်သည်ကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည် လုပ်ရသည်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ခဲသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်များစွာမြန်ဆန်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ပျော့ပြောင်းသောတာယာများထက်ဆွဲအားနည်းသွားသည်။ သို့သော်တကယ့်ကမ္ဘာကြီးတွင်ပုံမှန်လမ်းများပေါ်၌ပျော့ပျောင်းသောတာယာများသည်တုန်ခါမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ တုန်ခါမှုသည်သင့်ကိုတကယ်နှေးကွေးစေသည်။ အမှန်မှာ၊ ပို၍ ပျော့ပြောင်းပြီးအဆင်ပြေသောတာယာသည်လျင်မြန်စွာလှိမ့်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောတာယာသည်နှေးကွေးစွာစတင်လှည့်လာသောအခါ၎င်းတို့သည်ထောင့်တစ်ဝိုက်တွင်လေကိုတိုက်ခတ်သွားသောကြောင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြောဝံ့။
ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ပျော့ပျောင်းတဲ့တာယာတွေကထိုးဖေါက်တာကိုပိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ (ပေါ့ပါးသောဂီတ) သင်သတိပြုမိကောင်းပြုနိုင်မှာက 'ကျွန်ုပ်သည်တာယာဖိအားကိုကျွန်ုပ်မတိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်ရှိရာကိုကျွန်ုပ်ပိုက်ဆံထည့်ရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ၇၃ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး ၂၃ စင်တီမီတာကျယ်သောတာယာကိုသုံးတဲ့အခါကျွန်တော့်ရှေ့ဘီးမှာ ၉၅ PSI၊ နောက်ဘက်မှာ PSI ၁၀၀ ထားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာအလေးချိန်ပိုနည်းပါတယ်၊ ၂၅ နှစ်အတွက် ၈၀၊ ၈၅ PSI၊ ၂၈ နှစ်အတွက်ပေါ့။ ငါ 60 နှင့် 65 PSI ကို run ။
ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်အနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးလျှင်သင်နည်းနည်း run ချင်သည်ဆိုလျှင်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျှင် ၁ PSI လျော့နည်းပြီးသင်ကလေးလံလျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိုသည်၊ သင်ဘားတွင်အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အလေးချိန် ၂၅ ပေါင်တိုင်းအတွက် ၁ bar ခန့်လောက်ကွာသည်။ သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားမည့်အင်တာနက်ပေါ်မှအမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောဂဏန်းတွက်စက်များစွာရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ တစ်ခုရှိလျှင်သင်ဤဆောင်းပါးမှသင်ဖယ်ထုတ်သင့်သည်ထင်သည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြီးပြည့်စုံသောတာယာဖိအားကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ကိုဖြုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကမြင်းစီးသူရဲကိုမြင်းစီးသူရဲအပေါ်မူတည်တယ်။ တကယ်တော့ ch၊ တစ်နေရာမှ t ။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ဖုံးထားတာတွေကိုစဉ်းစားပါ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကထိုးဖေါက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်ပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိသနည်း , ကမ္ဘာပေါ်မှာစူပါချောမွေ့ကတ္တရာ? ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် PSI အပိုထပ်ထည့်ချင်သည်။ ပတ်ပတ်လည်မှာရှုပ်ထွေးနေဖို့မကြောက်ပါနဲ့၊
အိုးတစ်ခုလည်းရှိတယ်၊ ဒါဟာသင့်ရဲ့တာယာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ ဖိအားကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။ တကယ်လို့သင့်မှာတကယ်ပေါ့ပါးတဲ့ဘီးတပ်စက်တစ်ခုရှိရင်ဖိအားကန့်သတ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီဇစ်တွေလိုတစ်ခုခုရှိနေရင် PSI 200 ကျော် PSI ထက်ပိုပြီးဖောင်းပွတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ (ပေါက်ကွဲမှု) Whoa ။
ကောင်းပြီ၊ အမှားအတွက်တည်ဆောက်ထားသောအမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ယခု GCN ကိုမှတ်သားထားပါ။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ပါ။ ကွင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်ပိုမိုရှာဖွေလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်ထိုးဖောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ထိုနေရာတွင်ပါ ၀ င်သောနေရာများတွင်ကျယ် ၀ န်းသောအနားကွပ်များနှင့်တာယာကျယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်မီမေးနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ကွင်းဆက်တုန့်ပြန်မှုဆိုင်ကယ်သမားများကမပံ့ပိုးပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော site တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အနေဖြင့်အရာရာကိုအွန်လိုင်းသို့ဂျပန်သို့တင်ပို့နိုင်သည့်အပြင်အချို့သောဒြပ်ပေါင်းများလည်းကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ခုအကြားစျေးဝယ်လေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တာယာအချို့ကိုအွန်လိုင်းမှာကြားသည်။ ငါလေ့ကျင့်ရသောနှင့်ပြိုင်ကားစက်ဘီးစီးပေါ်တွင်စီးနင်းခြင်းနှင့်အသွားအပြန်ဘို့ငါအကြံပြုထားတဲ့တာယာတွေအကြောင်းငါဆောင်းပါး, ဒါကြောင့်အထုပ်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ထိုတာယာစစ်ဆေးကြကုန်အံ့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်။ ငါတို့မှာတကယ်တော့တောင်ကြီးတောင်ငယ်တာယာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီတာယာနဲ့ဒီတာယာအကြားဒီတာယာနဲ့ဒီတာယာတွေအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဆိုတာသင်ချက်ချင်းသတိပြုမိမှာပါ။
အဓိကခြားနားချက်မှာဤတာယာကိုခေါက်။ မရသည့်ဤခေါက်များဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့် clincher တာယာလို့ခေါ်တဲ့ဒီတာယာတွေအများကြီးကွာခြားမှုရှိတယ်၊ ဒါတွေကတာယာပေါ်မူတည်ပြီးခေါက်တာနဲ့ပိုတူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတွေကပြောတဲ့ခေါက်တာယာတွေဟာတာယာကိုချွတ်လိုက်တာနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်တာလို့လူတွေကပြောကြတယ်။ နည်းနည်းပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးပိုကျယ်တဲ့တာယာတွေကဈေးချိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ဝါယာကြိုးပုတီးစိပ်နဲ့သွားရင်ငွေနည်းနည်းသက်သာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီရွေးစရာတချို့ကိုသွားကြည့်ရအောင်။ ငါပြောချင်တဲ့ပထမဆုံးတာယာကတော့ငါ့အကြိုက်ဆုံးခရီးသွားတာယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Schwalbe ဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်သေချာမသိဘူး။ Schwalbe ဒီတာယာရဲ့မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့မာရသွန်ဖြစ်တယ်။ ဒါကလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားတာယာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းအများစုဟာဒီတာယာနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီတာယာရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့စတာကတကယ်ကိုတတ်နိုင်တယ်၊ မဆိုးဘူး၊ ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ကုန်ကျတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကပုံမှန်ဈေးနှုန်းနဲ့အွန်လိုင်း ၀ ယ်တဲ့အခါမှာထိပ်မှာရေပရိုဖိုင်းရှိတယ်၊ တကယ်တော့တာရှည်ခံအထူကာကွယ်မှု၊ ခင်ဗျားဒီဇယားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့စားပွဲပေါ်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမြေပုံမှာအဆင့် ၅ ဆိုတာရှိတယ်။ ဒါကကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုငါဒီတာယာတွေကိုနှစ်နှစ်ကျော်စီးပြီးငါ့ခရီးသည်ကိုသွားနေတယ်။ ဆိုင်ကယ်၊ ငါ့အဝါရောင်ရှင့်မက်ဒီဆင်နှင့်ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်တိုတာယာမရှိသေးပါ။ ဤစက်ဘီးတွင်မိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးများစွာရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအလွန်အစိုင်အခဲတာယာများဖြစ်သည်။ နည်းနည်းကြာရှည်စေတဲ့နည်းနည်းအဖြူရောင်တီးဝိုင်း r သည်သင်တိကျစွာစီးနင်းသည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ခရီးသည်တင်စက်ဘီးစီးခြင်းကို ၂၅ နှစ်တွင်စီးနင်းသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ဖြစ်နေသေးသော်လည်း၎င်းသည်တာယာများအတွက်နေရာသိပ်မကျန်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုကြီးတာကသူတို့တာယာအတွက်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကြီးကြီးမားမားကြီးစိုးထားလို့ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကိုရရှိနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကကြာရှည်ခံတယ်။ မိုင်ထောင်ချီပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးမှာငါရေးခဲ့တာပါ။ မိုးကတကယ်အစိုင်အခဲတာယာများအလွန်ကြီးမားသောစျေးနှုန်း။ တကယ်တော့မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် Schwalbe မာရသွန်တာယာအတွက်ခိုင်မာသည့်ထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏နောက်တာယာတစ်ခုမှာ Schwalbe na မှဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် deDurano. Japan တွင်နေထိုင်သည်၊ ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုအသံတွေဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတာကိုပြောဖို့ဒါကြောင့် Duran တာယာအတွက် Durano မော်ဒယ်ကငါ့အတွက်တာယာအသစ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမ ၀ ယ်ရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုနဲ့မာရသွန်တာယာအကြားတော်တော်လေးစျေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိတယ်။ ငါပဲ showe d၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်မှာဒီဟာလေးချက်သက်တမ်းသာရှိသည်။ ငါမသေချာဘူး၊ အရင်တာယာဟာအစိမ်းရောင်အဆင့်ရှိခဲ့တာ၊ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စံနှုန်းအရဆိုလိုသည်မှာ ပရိုဖိုင်းကိုသင်မြင်ရသည့်အတိုင်းမာရသွန်ပုံစံကဲ့သို့ရေလိုင်းများနီးပါးမရှိကြသောကြောင့်၎င်းသည်ဤနည်းဖြင့်ကာကွယ်မှုနည်းပါးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်စျေးသက်သာစွာဖြင့်တာယာတစ်လုံးလျှင်ယန်း ၃၀၀၀ ခန့်ပေးခဲ့သည်။ ဒါက ၂၇ ၂၆ ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီတစ်ခုအတွက်ယန်း ၂,၄၀၀ ခန့် (သို့) ဒေါ်လာ ၂၂ ဒေါ်လာလောက်ရှိတယ်၊ ၅ ဒေါ်လာ ၆ ချောင်းဒါမှမဟုတ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သက်သာတယ်။ သူတို့တစ်တွေလျောက်ပတ်သောဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနည်းပါးသောကြောင့်၎င်းသည်ဤအရာသည်နည်းနည်းလေးပင်လေးလံနေပုံရသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်။ စမ်းသပ်ပြီးထိုခေတ်ရှိ Schwa မတိုင်မီသင်ကြားခဲ့ဖူးပါကကျောက်သား ah no de Reynaud ကကျွန်ုပ်အားသူအလုပ်လုပ်သည့်အတိုင်းပြောပြပါလိမ့်မည် မင်းအတွက်တော့သူတို့မှာအွန်လိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကမျှော်လင့်ပါတယ်၊ သူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဒီပိုသုံးပြီးငါ့ရဲ့ခရီးသည်တာယာတွေအတွက်ပိုက်ဆံနည်းနည်းသက်သာအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒီမှာ ၂၅ ခုရှိတယ်။ ငါ၏အပြိုင်ကားစက်ဘီးဒါငါဤအသီးအသီးအစုတခုရတယ်။ ငါအလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသောနောက်ဆုံးခရီးသည်တင်တာယာသည် Continental Gator အသားအရေဖြစ်သည်။ သင်၏အများစုသည်ဤတာယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစီးနင်းသောစက်ဘီးစီးခြင်းတွင်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြားတစ်ချပ်မှမရှိသေးပါ။ တာယာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ယူပါ။ ငါရရှိတဲ့ပြားချပ်ချပ်တိုင်းဟာပြွန်ကိုယ်ထည်ကနေမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေကနေပဲဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆဲလ်တွေကအရမ်းချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မြန်ဆန်လွန်းလို့ဒီတာရာတွေကို Doraces အတွက်သုံးခဲ့တယ်။ ငါဒီနေရာမှာဂျပန်ရှိဤတာယာများပေါ်တွင်ငါစီးနင်းလိုက်ပါပြီးသောသေတ္တာများနှင့်ဂျပန်ရှိ Cat1 Crits ၌ဤတာယာများအခြားပြိုင်ကားတာယာများကဲ့သို့ပေါ့ပါးသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းငါ၏ပြိုင်ကားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပါ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရလဒ်များကိုသာအာရုံမစိုက်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြားချပ်ချပ်မဖြစ်ရန်အာမခံထားသောတာယာတစ်ခုသာရှိလိမ့်မည်။ စွန့်စားမှုအနည်းငယ်ယူပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသောတာယာရှိလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ကားတာယာများအကြောင်းပြောသောအခါ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ - မောင်းနှင်။ ဤအရာများကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ထိုတာယာများ၏အားနည်းချက်မှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိအခြားတာယာ ၂ ခုထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ ဒါကိုဒေါ်လာ ၅၀ ၀ န်းကျင်လောက်မှာအကြံပြုသင့်ပါတယ်။ မင်းကံကောင်းတယ်၊ မင်းအွန်လိုင်းမှာစျေး ၀ ယ်ဖို့အချိန်ရှိမယ်ဆိုရင်၊ ဒါတွေကိုဒေါ်လာ ၄၀ လောက်ရနိုင်တယ်။ တကယ်ကံကောင်းရင်ဒေါ်လာ ၃၅ ဒေါ်လာရနိုင်တယ်။ သို့သော်၊ နောက်တဖန်သင်ရရှိသောအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဤကွင်းဆက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဒီမှာခေါက်သည့်ပုံစံရှိသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးပြီးခဲ့သည့်ဤနှစ်ခုကဲ့သို့ ပိုမို၍ ပွင့်လင်းသောစတိုင်ဖြစ်သော Wired bead ထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့အများကြီးပိုစျေးသက်သာတာကိုတွေ့ရင်မင်းကမှန်တယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အကယ်လို့ Wired bead နဲ့ foldable ကိုလိုချင်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးပါ။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံး ၅ ဒေါ်လာတန်သောဒေါ်လာ ၄၀၄၅ ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းသူများထက်များပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အစဉ်အမြဲရောင်းနေလျှင်၎င်းတို့ကိုသူတို့ဝယ်ယူမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အစားထိုးရန်လိုပါကကျွန်ုပ်သည်စောင့်ဆိုင်းမည့်အစား၎င်းတို့ကိုရလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုအနည်းဆုံးဝယ်ယူဖို့မဝယ်နိုင်ရင်ဈေးကောင်းပေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီခေါင်းစဉ်ကိုသုံးမှာဖြစ်လို့ပါ။ ဒါတွေဟာဂျာမနီမှာလုပ်ထားတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာကျောက်စရစ်လမ်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်စီးနင်းခဲ့ရတာပါ။ နေရာတိုင်းမှာစက်ဘီးနဲ့ငါ့မှာရှိတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုငါ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါ့ဇနီးရဲ့ဆိုင်ကယ်စီးမှာ။ ငါ့မှာဆိုင်ကယ်စီးပြီးစက်ဘီးစီးတာပေါ့၊ ငါဟာဖုန်လမ်းတွေပေါ်မှာစီးပြီးလမ်းမှာကောင်းကောင်းစီးတတ်တယ်။ တောင်ကြီးတောင်ငယ်တောင်ငယ်တွေမှာလည်းကောင်းတယ်။ မယုံနိုင်စရာပြnoနာလည်းမရှိဘူး။ ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်သော roller များ၏ကြာရှည်ခံမှုသည်ဤပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာခရီးဝေးတာယာကိုသင်ရှာဖွေနေလျှင်သင်ကြိုးစား။ မြန်ဆန်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သေးလျှင်သင်ဟာငွေစုချင်တယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြာရှည်ခံတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သင်လိုချင်တဲ့တာယာကသင်လိုချင်တဲ့တာယာဖြစ်တယ်။ တစ်ခုခုမှားနေလား ဤပြwithနာများ၏တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းပိုနည်းသောကြောင့်သင် Gator အရေခွံများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာသွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မိုးရေချိန်တွင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဤဆောင်းပါးတွင်မဖော်ပြခဲ့သောလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အသွားအလာအတွက်အသုံးပြုရန်အခြားလမ်းတာယာအကြံပေးချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးတွင်အသုံးဝင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးတွင်မရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ သင့်တွင်အခြားစျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းချိုသာသောဖြေရှင်းချက်များရှိပါကမှတ်ချက်ပေးပါ။ ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့်ထိုးဖေါက်နိုင်သည့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ မှတ်ချက်များတွင်လူတိုင်းကိုအသိပေးပါ။ အသစ်သောတာယာတွေလိုတယ်၊ ဒါကဒီနေ့ဆောင်းပါးအတွက်ပါ။
ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤဆောင်းပါးအမျိုးအစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံတွင်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များပိုမိုကြည့်လိုပါကဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင့်မှာအကြံဥာဏ်အသစ်တွေရှိရင်၊ ဒီဆွေးနွေးခန်းကိုပံ့ပိုးချင်တယ်ဆိုရင်မှတ်ချက်များထဲမှာထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Patreon link ကိုကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဘဝအကြောင်းပိုမိုဆောင်းပါးများကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်လျှောက်စက်ဘီးစီးစီးနင်းနေသောဆောင်းပါးများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ Tool Cruise တွင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Airless စက်ဘီးတာယာရော်ဘာအဆုတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကြာရှည်ခံမှုကတိပေးတာယာနှင့်မျှမတိုက်ခန်း။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ထုတ်လုပ်သူသောသူတို့၏ကြော်ငြာလေယာဉ်မဲ့တာယာတိုက်ခန်းဖယ်ရှားပစ်နှင့်ကြာကြာကြာရှည်။ မသည့်အခါသူတို့၏ဘဝကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြခြင်းငှါသံသရာအဆုံးသတ်, သူတို့ရဲ့စီးပွားဖြစ်မြှုပ်အချို့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Continental က Gator Hard-shell ကိုမြို့ပြစက်ဘီးတာယာ။
Hutchinson အထူးကြပ်မတ်2လမ်းစက်ဘီးတုိုင်း။
Vittoria Zaffiro Pro III ကို ၂၃ လမ်းစက်ဘီးတုိုင်း။
Maxxis Re- ဖျူးခေါက်တာယာ။
အဘယ်အရာကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်စေတာယာ? TO သို့စက်ဘီးတာယာအခြေခံဒြပ်စင် (၃) ခုပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Schwalbe အားလုံးနီးပါးတာယာထိုးဖေါက်ကာကွယ်မှုခါးပတ်ရှိသည်။
100% ကို Maintenanceအခမဲ့ငါတို့မရှိဘူးတာယာအပူချိန်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု (သို့) မည်သည့်ထိုးဖေါက်ခြင်းကြောင့်မဆိုထည့်သွင်းခြင်းများကိုမထိခိုက်ပါ။ သင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးမေ့လိုက်သည့် Air F? m လေယာဉ်မရှိသည့်စက်ဘီးစီးသည့်နည်းပညာဖြင့်နောက်တဖန် pump တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။
Santa Cruz Chameleon ဘောင်
ကှနျ့လူကြိုက်များပြီးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ ၆ အောင်စထည့်သည်။ သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ရန်တာယာအရာပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၌သင်တို့၏လှိမ့ခုခံမှသိသိသာသာဖြည့်စွက်တာယာ။ သို့သော်သင်သည်ဆူးများစွာသို့မဟုတ်လမ်းအပျက်အစီးများရှိသောanရိယာတွင်နေထိုင်ပါကကရင်ကောင်းစွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိအလေးချိန်။
သင့်ရဲ့အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်အချို့တာယာပြားချပ်ချပ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်: ချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုအားဖြင့်ထိုးဖောက်။ အဆို့ရှင်ပင်မအားပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း။ ပွတ်သို့မဟုတ်ဝမ်းခွဲတာယာ။
အစိုးရနှင့်လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုယူနီဖောင်း။ နှင့်အတူ Adventure ကို AT WranglerKevlarအဆိုပါယူနီဖောင်းအတွက်ပျှမ်းမျှအစီရင်ခံစာများအထက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်တာယာအရည်အသွေးအဆင့်စနစ်။ Treadwear အတွက်ရမှတ် ၆၄၀ ရရှိခဲ့သည်။ အပူချိန်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအဆင့်အသီးသီး B နှင့် A ရှိကြ၏။
ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သော၊ ထိုးဖောက်နိုင်သောဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းပိုရှိသည်
နှင့်နိုင်လွန်အလွှာကိုအစားထိုးKevlarရလဒ်တစ်ခုတာယာ၎င်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သောထိုးဖောက်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးကြာရှည်ခံမှုလည်းရှိသည်တိုးတက်လာသောGoodyear သည်မိုင် ၆၀,၀၀၀ ကျော်လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးအသစ်အကန့်အသတ်ဖြင့်အာမခံနိုင်သည်တာယာ။
Hutchinson fusion5သည် tubeless ယာလား။
ထိုနည်းတူစွာပင် Hutchinson Fusion5သည် 'infernal' 11Storm performance ဒြပ်ပေါင်း၏ကျေးဇူးကြောင့်လူသုံးယောက်စလုံးကိုသီးသန့်ထားရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာအစတစ် ဦး 'အားလုံးရာသီ' 'ယာအဖြစ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ road tubeless ၏မူလရှေ့ဆောင်ထံမှမျှော်လင့်ထားချင်သကဲ့သို့, အဆိုပါ Hutchinson Fusion5သည် tubeless အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူက tubeless ဖြစ်စေသို့မဟုတ် clincher ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Overide သည်လမ်းပေါ်တွင်လျင်မြန်ပြီးသစ်တောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တွေ့ရသောကျောက်စရစ်ခဲများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာလျှပ်စီးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Hutchinson ပေါင်းစပ် ၅ ကို clincher အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဒါဟာအစတစ် ဦး 'အားလုံးရာသီ' 'ယာအဖြစ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ road tubeless ၏မူလရှေ့ဆောင်ထံမှမျှော်လင့်ထားချင်သကဲ့သို့, အဆိုပါ Hutchinson Fusion5သည် tubeless အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူက tubeless ဖြစ်စေသို့မဟုတ် clincher ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ Campagnolo Bora One ဘီးများတပ်ဆင်။ တာယာများကိုတပ်ဆင်ပြီး၊
အကောင်းဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်အဆင့်မြှင့်ခြင်း - လက်တွေ့ကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များ
ငါ့လမ်းဆိုင်ကယ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ သင်၏ပျမ်းမျှစက်ဘီးစီးနှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၅ သင့်အစားအစာကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန်ရန်သင်ပိုမိုသန်မာလာအောင်သို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လိုအပ်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးမိတ်ဖက်များနှင့်အတူစီး။ ၎င်းသည်အခြေခံသိပ္ပံပညာဖြစ်သည်။ သင်လေနှင့်တွေ့လေလေ၊ သင်၏စက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်ပါ။ သင့်ရဲ့နို့မှုန့် threshold.14 တိုးမြှင့်။ 2016 ။
ကျောက်သားစက်ဘီးစီးခြင်း - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
Boulder သည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်ကောင်းပါသလား။ ကျောက်သားသည်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အထူးနေရာဖြစ်သည်။ Boulder Valley တွင်မိုင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်စက်ဘီးစီးရန်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်မိုင်ပေါင်း ၉၆ မိုင်၊ လမ်းပေါင်း ၈၄ မိုင်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောစက်ဘီးလမ်းကြောင်း ၅၀ မိုင်တို့ပါဝင်သည်။
de ပြင်သစ်ဇာတ်စင် 11 ရလဒ်များကို tour
Tour de France အဆင့် 11 ရလဒ် - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
အဘယ်သူသည် Stage 11 Tour de France? Wout van Aert
ချိုသောသွားပရိုတိန်းအမှုန့် - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများကို
ပရိုတိန်းအမှုန့်ကိုယူ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ ပါးစပ်ဖြင့်သောက်သောအခါ - ပရိုတင်းသည်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်သင့်လျော်စွာသောက်သည့်အခါဘေးကင်းပါသည်။ အလွန်မြင့်မားသောဆေးများသည်အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှု၊ အော့အန်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊
ရင့်ကျက်သောလူကြီးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများ - မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများသည်မည်သည့်ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များလိုအပ်သနည်း။ အာဟာရနှင့် Dietetics အကယ်ဒမီကသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ကယ်လစီယမ်၊ ဗီတာမင် D၊ ဗီတာမင် B-12၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်ဖိုင်ဘာများစားသုံးမှုကိုအထူးဂရုပြုသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်နို့နှင့်ဒိန်ချဉ်သည်ကယ်လစီယမ်နှင့်ဗီတာမင် D ကိုတိုးပွားစေသည်။
ချောချောမွေ့မွေ့လက်များအတွက်ဆပ်ပြာ - ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ
အကောင်းဆုံးလက်ဖျက်စက်ကဘာလဲ။ 293037010 တွင်အကောင်းဆုံးရောင်းချသူများ - လက်သန့်ရှင်းစက် Permatex 25616 Fast Orange Xtreme လက်သန့်ရှင်းစက် (ပုလင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်) ၁၅ အောင်စ။ Tub O 'Scrub TS64 Heavy Duty Pumice-free Hand Cleaner, Tub O မပါဘဲကြမ်းတမ်းသောအညစ်အကြေးနှင့်ဖုန်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်' Scrub TS18 လေးလံသော Pumice-free လက်သန့်ရှင်းစက်၊